Khudbadda Cilmi-baarista ah waxay soo bandhigeysaa 4 Talo oo looga hortago in lagu xakumo Ransomware
Weerarrada ransomware waxay noqdeen kuwo aad u caadi ah maalmahan lala yeesho shirkadaha, dawladaha, iyo shirkadaha ay u maleynayeen in nidaamka xogta ugu amaansan ay lumiyeen kumanaan doollar si loo hir-galiyo. Waa kuwan afar talooyin oo looga hortagayo in lagu garaaco ransomware.
Ogsoonow in talooyinka soo socda ay soo saareen Frank Abagnale, khabiir ka socda Semaat , wuxuu kaa caawin karaa inaad ka badbaado safaraha iyo fayraska.
1. Iska ilaali inaad furtaan fariimo email ah oo shaki leh
Kiisaska intooda badani waxay email u diri doonaan bartilmaameedyada ay ku jiraan lifaaqa ama shoogga. Furitaanka lifaaqa ayaa si toos ah u rakibi doona software-ka kombiyuutarkaada si ay u siiyaan kumbuyuutarka gacanta oo buuxa kumbuyuutarkaaga. Sidaa darteed, marna ha furin lifaaqyada email-ka ee shakiga leh xitaa haddii cinwaanka u egyahay kuwa la midka ah asxaabtaada ama asxaabtaada
2. La soco xiriiriyeyaasha aad gujiso
Ma ogtahay in mid ka mid ah riixaayo isku xirka spammy-ku wuxuu keeni karaa ransomware in lagu rakibo kombiyuutarkaaga? Taasi waa sax - inta badan shirkadaha lagu soo rogay ransomware ee la soo dhaafay oo kaliya lahaa in ay guji xiriir ah oo eegay caqli kaliya si ay u dhammeeyaan kumanaan dollar oo lidi ku ah hackers. Abaalmarinta sheekada waa inaad ka fogaato in aad gujiso xiriir kasta oo aad ku soo gasho internetka. Weligaa ma ogid waxa laga yaabo in ay ka dambeeyaan daahyada daahyada sugaya in ay cunaan lacagta adag ee aad kasbatay.
3..Eeg meesha aad ka soo dejisan karto software
Waxaa jira kumanaan shirkado horumarineed oo software ah oo adduunka ah. Nasiib darro, dhammaantood ma aha mid sharci ah. Qaar waxay ku jiraan ganacsiga iibinta software xumida macaamiisha halkii laga heli lahaa software sharci ah oo uu isticmaaluhu raadinayo. Soo dejinta iyo rakibidda software noocan oo kale ah ayaa isla markiiba bilaabi doonta lacag madaxfurasho ah oo ku saabsan kombuyuutarkaaga oo ay ku xiran tahay dhammaan waxyaabaha ku jira ilaa aad ka bixiso lacagta madax furashada. Si aad u noqoto dhinaca ammaanka, waxaa lagula talinayaa in aad iibsato oo aad ka soo qaadato software kaaga oo ah goobaha sharciga ah iyo kuwa la qadariyo.
Ka sii muhiimsan, ka fogow noocyada bilaashka ah ee jaban ee software-ka. Intooda badani waxay isugu yimaadaan barnaamijyada saddexaad ee isku bedelaya ransomware marka aad rakibtid software-ka. Adware waxaa sidoo kale lagu xiri karaa barnaamijka dillaacsan ama bilaashka ah
4. Maal-galinta ku-dhaqanka ransomware ee adag
Kororka weerarka ransomware ayaa kiciyay shirkadaha ammaanka internetka si ay u horumariyaan software adag oo ka horjeeda anti-ransomware oo aad ku rakibi karto kombuyutarkaaga si loo yareeyo khatarta ah in lagu dhufto mid. Cilmi-baaris lagu ogaanayo ugu kalsoonida badan, hufan, oo lagu kalsoon yahay anti-ransomware in aad ku rakibi karto kombuyutarkaaga. U hubso inaad jeegareyso jadwal ahaan ka dib markaad ku rakibtid si aad u hubiso kombiyuutarkaaga nooc ka mid ah software noocyadan xun. Intaa waxaa dheer, hubso in aad si joogto ah u cusbooneysiiso si kor loogu qaado awoodda ay u leedahay in ay wax ka qabato kharashka hadda iyo mustaqbalka. Xusuuso in khaniisiinta ay sii daayaan noocyada cusub ee software this xaasidnimo online maalin kasta.
Afartan tilmaamood waxay kaa ilaalin doonaan madax furashada. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa in aad dib u cusboonaysiiso nidaamkaaga hawlgalka sida shirkadaha badankood waxay cusbooneysiiyaan kormeerkooda si ay uga dhigaan kuwo aan loo dulqaadan karin ransomware Source . Muhiimad ahaan, marwalba dib u soo celinta faylashaada qoob-ka-adag ama dariiqa si aad u hesho haddii ay dhacdo weerar, waxaad qaabeyn kartaa kombiyuutarka oo aad dib u heleysaa faylasha halkii aad ku bixin lahayd lacagta madaxfurashada ee loo yaqaan 'hackers'